Warar dheeraad ah ka soo baxaya iska horimaad ka dhacay duleedka Baarlgaal – SBC
Warar dheeraad ah ka soo baxaya iska horimaad ka dhacay duleedka Baarlgaal
Posted by editor on Agoosto 19, 2011 Comments
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya israsaaseyn ka dhacdey duleedka degmada Baargaal ee gobolka Bari taasi oo dhexmartey ciidamo ilaalo ahaan ula socdey wafdi ka socdey maamulka Puntland oo ku socdey degmadaasi iyo maleeshiyo beeleed ka soo horjeeday in wafdigu soo gaaro degmadaasi.
Israsaaseyntan ayaa looga itaal roonaadey maleeshiyaadkii ka soo jeeday deegaanka kuwaasi oo la sheegay in gacanta lagu dhigay, waxaana jira warar sheegaya in maxaabiis ahaan dhalinyaradii la qabqabtey la soo gaarsiiyey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Wasiirka amniga Puntland Col. Khaliif Xiise Mudan oo ka mid ah wafdiga Puntland ee gaarey degmada Baargaal ayaa sheegay in koox hubaysan oo wasiirku ku tilmaamay nabad diid ay jidka u galeen wafdiga waxaana uu sheegay in la qab qabtey kooxdaasi.
Safarka wafdigan ayaa ku soo aadayaa iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyey deegaankaasi laga sheegayey dhaqdhaqaaq maamul la baxay Raascaseyr oo halkaasi la sheegay inay ka wadaan xubno uu ka mid yahay Faarax Dooxajoog oo xilal wasiir ka soo qabtey maamuladii Puntland, laakiin madaxda Puntland ayaa ku adkeysanaya inaanu jirin wax maamul ka madaxbanaan Puntland oo halkaasi ka jira.
Kulamada dhexmarey waxgaradka & cuqaasha deegaankaasi & wafdiga wasiirada Puntland ka mid ah ee haatan deegaankaasi booqanaya wararka dambe kala soco insha ALAAH.